ट्रम्पका कट्टर विरोधी बने मेक्सिकोको राष्ट्रपति, बन्ला त सीमामा पर्खाल ? - Deshko News Deshko News ट्रम्पका कट्टर विरोधी बने मेक्सिकोको राष्ट्रपति, बन्ला त सीमामा पर्खाल ? - Deshko News
ट्रम्पका कट्टर विरोधी बने मेक्सिकोको राष्ट्रपति, बन्ला त सीमामा पर्खाल ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सन् २०१६ को निर्वाचन अभियानको एउटा बहुचर्चित तर विवादास्पद एजेण्डा थियो– मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल । उहाँले आफ्ना हरेक सम्बोधनमा भन्नुहुन्थ्यो, मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउँछु तर त्यसको खर्च मेक्सिकोलाई नै तिराउँछु ।
तर राष्ट्रपति ट्रम्पले भने ओब्राडोरलाई आफ्नो ट्वीट अकाउन्टमार्फत बधाई दिनुभएको छ । उहाँले मेक्सिकोको सो निर्वाचनलाई वैधानिक भन्दै नयाँ राष्ट्रपतिसँग मिलेर काम गर्ने बताउनुभएको छ । दुई देशको यो कूटनीतिक अभ्यासकैबीचमा दुवै देशका विश्लेषकको प्रश्न भने जिवीतै छ– के सीमा क्षेत्रमा पर्खाल बन्ला त ? रासस